Puntland iyo Soomaaliland oo guulo ka kala sheegtay dagaalka ka socda Tukaraq. – Hornafrik Media Network
Puntland iyo Soomaaliland oo guulo ka kala sheegtay dagaalka ka socda Tukaraq.
By HornAfrik	 Last updated May 15, 2018
Hornafrik-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxa dagaal shalay iyo maantaba ka taagan deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, kaas oo u dhaxeeya ciidamo kala taabacsan Puntland iyo Soomaaliland.
Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in dagaalka uu ka dhashay khasaaro soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay.
Wariye Sakariye Axmed oo ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo la hadlay goor dhow Idaacada Kulmiye ayaa sheegay in ay jirto cabsi xoogan, wuxuu sidoo kale uu tilmaamaha in dadka deegaanka ay bilaabeyn in ay kabarakacaan iyadoo lagu guda jiro xili roobaad, dadkuna ay ku adagtay xiligaan in ay barakacaan.
Wariyaha ayaa sidoo kale sheegay in xaalada hadda ee deegaanka Tukaraq ay tahay mid ka dagan sidii hore inkastoo wali deegaanka dhawaqa rasaasta laga maqlayo, laakiin wuxuu sheegay in dagaalkii saakay dhacay uu ahaa dagaal aad u xooganay.
Wasiirka Warfaafinta maamulka Puntland Cabdi Xersi Qarjab oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garowe kana hadlay dagaalkaas wuxuu sheegay in dagaalka ay soo qaadeen ciidamada Soomaaliland ee kuu sugan gobolka Sool, wuxuuna guulo ka sheegtay dagaalkaas.
Dhankale madaxweynaha Soomaaliland Muusa Biixi Cabdi oo isaga oo ku sugan magaalada Hargeysa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in guulo ay gaareen ciidamada Soomaaliland ee dagaanka Tukaraq ee gobolka Sool.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ku baaqay in la joojioyo dagaalka Tukeraq.